XOG: Somaliland iyo Al Shabaab oo ka wada shaqeenaya Weerar ka dhan ah Puntland, Mise og tahay PL? – Puntlandtimes
XOG: Somaliland iyo Al Shabaab oo ka wada shaqeenaya Weerar ka dhan ah Puntland, Mise og tahay PL?
Xog isa soo tareysa oo ay warbaahintu ka helayso xubno kamid ah maamulka Somaliland iyo saraakiisha sirdoonka ayaa sheegaya inuu jiro dhaq dhaqaaq ay kooxda Al Shabaab ka wado gobalka Mudug kaasi oo ku wajahan deegaanada Puntland.
Puntland waxay waqtigan awoodeeda ciidan iskugu geysay deegaanka Tukaraq ee gobalka Sool oo ay isku horfadhiyaan Somaliland, waxaana cabsi laga qabi karaa dagaal culus, laakiin qorshaha kale ayaa ah xaajo kale oo ugub ah.
Adinba soo jabhad kuma hubayn oo saldhig kama siinin qardho.
Xaalka ma fiicno ee nimanka si toos ah haloola dagaalo oo halaga fiirsado jabhadaan wax ka imaan kadha la ogeyn.
GAAS xataa hadii uu ogyahay makala jecla PUNTLAND iyo wixii dhib ah oo ku dhaca, wuxuuna fahmay sida dadka loo jaahwareeriyo oo xaqiiqada looga jeediyo, bal eeg si fashilkiisa uqariyo wuxuu ku jeediyay DEKAD GARACAD, si TUKARAQ iyo la xisaabtankii P&0 EE DEKEDA BOOSAASO looga jeesto wuxuu dadkii ku madhquuliyay federalka.